Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခုိုင်လူမျိုးများ ကိုယ်ပြည်နယ်ကိုယ်ချုပ်ခွင့်ရှိမှာသာ ပြသနာအားလုံး ရှင်းနိင်မည်။ ( မိုးသီးဇွန်)
ရခုိုင်လူမျိုးများ ကိုယ်ပြည်နယ်ကိုယ်ချုပ်ခွင့်ရှိမှာသာ ပြသနာအားလုံး ရှင်းနိင်မည်။ ( မိုးသီးဇွန်)
ကျနော် ရဲ့ နိင်ငံရေးရပ်တည်ချက်အရ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများကိုအားမပေးပါ။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးခွဲခြား၊ ယောက်ကျားမိန်းမ ဆက်ဆံမှုများကိုလည်း လက်မခံပါ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေ မှာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိသမျှ ရိုဟင်ဂျာပြသနာပြီးဆုံးမည်မထင်ပါ။ ဆင်းရဲမှု ပြသနာများ ဖြေရှင်းနိင်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။ အရင်းခံပြသနာမှာ ရခိုင်လူမျိုးအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်ြ့ပည်နယ် ကိုယ်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိတဲ့ပြသာနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ သဘာဝအရ ပယ်လယ်ရှိတယ်။ သစ်တောတွေရှိတယ်။ လယ်ကွင်းတွေရှိတယ်။ သဘ၀ဓါတ်ငွေတွေရှိတယ်။
ဒါတွေကို ရခိုင်လူမျိုးတွေစီမံခန့် ခွဲခွင့်မရှိတာပဒေသရာဇ်ာခေတ်အဆက်ဆက်မှသည် အင်္ဂလိပ်ခေတ် အလယ် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ဖွင့်ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးနဲ့ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမှုအများဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ရတာ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျမှုကြောင့်ရခိုင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ နိင်ငံခြားကို အစုလိုက်အပြုံလုိုက်ထွက်ခွာမှု ( Exodus) ဖြစ်လာပါတယ်။
တရုပ်နယ်စပ်ရွှေ လီ မှာတင် ရခိုင်လူငယ် ၂ထောင်ကျော်ရရာအလုပ်လုပ်ပြီး အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း ပြုနေရတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့မှာရခိုင် ၅သိန်းခန့် ရောက်ရှိနေပါတယ်။ မလေးရှားမှာလဲ သိန်းချီေ၇ာက်နေကြပါတယ်။
ရလဒ်ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မသီတာထွေးကဲသို့ သော် အမျိုးသမီးငယ်များ ဟာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု မရှိပဲဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မဟာ လူဦးရေ ဆုတ်ယုတ်မှုကြီး ( Great Depopulation) ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာများက အဆမတန် လူဦးရေတိုးပွားလာတယ်။ စစ်တွေမြို့မှာတင် တ၀က်က ရိုဟင်ဂျာ တ၀က်က ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်လာတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ ဒါက မကောင်းပါ။ လူမျိုးရေး တင်းမာမှုဖြစ်စေပါတယ်။
စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က ရခုိုင်လူမျိုးများကို စနစ်တကျမျိုးတုန်းအောင်လုပ်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်တင် ရှင်ယောင်ဆောင်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ တလင်တမယားစနစ် ( Monogamy) ကို ဥပဒေအရ မပြဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိင်ငံမှာ ပိုက်ဆံရှိသူများနှင့် အစ္စလန်ဘာသာဝင်များ အတွက် မယားပြိုင်ယူနိင်နေကြပါတယ်။ပွင့်ပွင်လင်းလင်းမရှိသောလည်း သိုသိုသိပ်သိပ် လုပ်ခွင့်ရှိနေပါတယ်။
ဒါကအဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာများက အစ္စလန်ဘာသာဝင်များဖြစ်တဲ့အတွက် မယားပြိုင်ယူတဲ့စနစ် (Polygamy ) ကိုကျင့်သုံး နိင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက် လူဦးရေအချိုးအစား မမျှတမှုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒါကို အမေရိကန်ပြည်တောင်စုမှာ ဥပဒေအရတားမြစ်ထားပါတယ်။ ဥပမာ တချို့သော မိုမန် ခရစ်ယန်ဘာသာဝင် ( Mormon) များ ဟာ မယားပြိုင်ယူဓလေ့ကို လျိုလ်ဝှက်ဆက်လက်ကျင့်သုံးလေ့ရှိတယ်။ ဒါကိုနိင်ငံတော်ကသိရင် မျက်နာသာမပေးပါ ထိရောက်စွာ အရေးယူလေ့ရှိပါတယ်။ ဖမ်းဆီးလေ့၇ှိပါတယ်။ မြန်မာနိင်ငံမှာမယားပြိုင်ယူခွင့်ရှိသော်လည်း မယား ၂ ယောက်သုံးယောက်ယူနိင်သူများမှာ မြန်မာလူမျိုးများအလွန်နည်းပါးလှပါတယ်။အများစု မဟုတ်ကြပါ။ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာအထူးပြောစရာမလိုပါ။ နိင်ငံခြားသားများ အများဆုံးယူနေကြပါတယ်။
နောက်တခုက ဘာသာရေးအဆောက်ဦးများကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အနီးပါးက ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကို မယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်းများက လဘ်ယူပြီး ဆောက်လုပ် ခွင့်တွေပေးတဲ့အတွက်ဘာသာရေး လူမျိုးရေး တင်းမာမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာ ဒီပြသနာမျိုးမ၇ှိလှပါ။ ဘာဖြစ်လုို့ လဲဆိုတော့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်ဦးတွေဆောက်မယ် ဆိုရင်အနီးပါးကပြည်သူလူထုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသာဆောက်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ နိင်ငံတော်က အမိန့် နဲ့ပယ်လို့ မရပါ။ ဒီနည်းနဲ့လူမျိုးရးဘာသာရေး တင်းမာမှုများမဖြစ်အောင်ထိမ်းသိမ်းနိင်ကြပါတယ်။
စစ်အုပ်စု က ရခိုင်လူမျိုး တွေအပေါ်မှာ လှည့်စားထားမှုက ဒို့ တွေက ဘာသာတူတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသူတွေဆိုတာနဲ့ပျားရည်နဲ့ဝမ်းချထားတာကိုခံနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ တကယ်က ဘာမှ မရပါ။ ဘာမှမရတဲ့အပြင် ရှေးဟောင်းဘုရားတွေကိုပါ အဖျက်ခံနေရပါတယ်။
နိင်ငံရေးအရကြည့်ရင်လည်း ၁၉၉၀ ခုနစ်၊ ၂၀၁၀ ခုနစ်၊ ၂၀၁၂ ခုနစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီများ အခက်ခဲကြားကပြိုင်ဆိုက်ကြရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်လေးယောက်ဟာ ကြံဖွတ်အမတ်တွေအဖြစ် နဲ့ရွေးကောက်ခံရတယ်။ ပါလီမန်ထဲ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက်စောလျင်စွာရောက်ရှိနေပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးအရကြည့်ရင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ ဆောက်လုပ်ရေးကုမဏီတွေ ကိုပဲ စစ်အုပ်စုက အထူးအခွင့် အလမ်းတွေပေးထားပါတယ်။ တကယ်ပြသနာကိုဖန်တီးနေတာဘယ်သူလဲ။ ဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် စစ်အုပ်စုကို ကျနော်တို့မယုံပါ။
အလားတူပဲ အစိုးရအဆက်ဆက်က နိင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစနစ်တကျမလုပ်ခဲ့ပါ။ စစ်တပ်မှလူဝတ်လဲလာတဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိများက လဘ်စားပြီး ပြည်ကြီးမှတရုပ်များ ဘင်္ဂလားဒေါရ်ှမှာ ရိုဟင်ဂျာများကို နိင်ငံသား အဖြစ်အသိမှတ်ပြုပေးခဲ့ကြပါတယ်။ တယောက်ကို ကျပ်ငွေ ၁၅ သိန်းမှာအထက်ကို ယူခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာ နိင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်။ လူနည်းစု အခွင့်အရေးတွေကို လည်းဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးထားကြပါတယ်။ နိင်ငံသားဖြစ်သင့်တယ်လုို့ဥပဒေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေကတော့နိင်ငံရေး၊လူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊စီးပွားရေးအရအဖိနိပ်ခံရသူများ၊ နေစရာနိင်ငံမရှိသူများကိုနိင်ငံသားလျောက်ခွင့်ရှိတယ်။ချမှတ်ထားသောဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီသူများ ကို နိင်ငံသားအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပေးပါတယ်။ သမတကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို နိင်ငံသားများလိုပဲခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါအပြင် တရားမ၀င်မိဘနှစ်ပါးက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြေပေါ် မှာ ကလေးမွေးဖွား လာပါက မွေးလာတဲ့ ကလေးကို နိင်ငံသားအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ ကလေးက သမတအထိ အရွေးခံပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဥပဒေချိုးဖေါက်လာရင် နိင်ငံသားအဖြစ်ကပြန်လည် ရုတ်သိမ်းမှုလဲရှိပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ၊ ပြည်ကြီး တရုပ်များကိုလဲ စီစစ်ပြီးနိင်ငံသား အဆင့်အတန်းကိုဥပေဒေကိုက်ညီပါက နိင်ငံသားအခွင့်အရေးကလဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်များအသွင် ကိုယ်ရပ်တည်ချက်တွေ ကိုဖေါ်ထုတ်ပြီး အာသာပြေပြောနေလို့ ကတော့ မပြီးပါ။ ခွေးလေးပေါစလေး ( Che Wa Wa) များ ဟောင် သကဲသို့ ဖြစ်နေမည်။
ခြေင်္သေ့ မင်းက သားကောင်ကိုဂုတ်ခဲသကဲ့ သို့လူမှု ပြသနာ ဆိုးကြီးများ ကိုအပြီးတိုင် သုတ်သင်နိင်မည်မဟုတ်ပါ။ ခြင်္သေမင်းတို့ မည်သည် ဘယ်မှာ ချက်ကောင်း( Vital Bite) ဆိုတာ ကိုသိသကဲသို့ပြစ်မှတ်ကိုသာ ကိုက်ခဲကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ပြသနာရဲ့ အမြစ်ကိုလှန်တူးပါ။ ကိုင်းဖျားကိုင်းနားကိုမလုိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 21:23
Labels: သတင်း, သူတို့အမြင်, ဆောင်းပါး
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခုိုင်လူမျိုးများ ကိုယ်ပြည်နယ်ကိုယ်ချုပ်ခွင့်ရှိမှာသာ ပြသနာအားလုံး ရှင်းနိင်မည်။ ( မိုးသီးဇွန်) . All Rights Reserved